Muran ayaa ka dhashay shahaadada Xaaf la siiyey,
Thursday October 25, 2018 - 20:02:24 in Wararka by Galgala News
Shirkii golaha maamul goboleedyada ee maanta kusoo gabagaboobay magaalada Garoowe ayaa waxa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf la gudoonsiiyey shahaado la sheegay inuu ku qaatay nabadda.
Hadaba waxa muran ka yimi shahaadada la gudoonsiiyey madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf. Shahaada ayaa waxa ku qoran in mudane Xaaf uu yahay madaxweynaha maamul goboleedka la dhaho Galmudug iyo in Cabdiweli Gaas uu yahay madaxweynaha dowlad la dhaho Puntland.
Habka qoraalka loogu qoray shahaada ayaa muujinaya in Galmudug & Puntland ay kala yihiin dowlad iyo maamul goboleed balse aysan ahayn labo maamul goboleed oo siman. Waxaana la sheegay in qoraalkan iyo shahaadada ba uu soo diyaariyey madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Arintan ayaa muujinaysa in weli Cabdiweli Gaas uusan aqoonsanayn maamul goboleedka Galmudug.